Madaxweyne Xasan Sheekh ”Al-Shabaab Qabiil maleh ,ehel maleh ,walaal maleh , soo dhaweyn maleh”	« AYAAMO TV
Madaxweyne Xasan Sheekh ”Al-Shabaab Qabiil maleh ,ehel maleh ,walaal maleh , soo dhaweyn maleh”
1938 Views Date February 22nd, 2014 time 1:42 pm
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka hadlay Munaasabad lagu xusayay 44-guuradii kasoo wareegtay markii la aas aasay Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed ayaa si kulul uga hadlay fikirka Dagaalyahanada Al-Shabaab.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in Kooxda Al-Shabaab ay yihiin kuwa usoo jeestay daadinta dhiiga umada Islaamka ,marwalbana doonayaan in ay waxyeelo u geestaan umada Soomaaliyeed ee hada kasoo kabsanaysa dhibaatooyinkii lasoo maray.
Madaxweynaha ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed in aysan soo dhaweyn dadka katirsan Al-Shabaab ,waxa uuna taabadalkeeda ka codsaday in ay soo sheegaan meeshii ay ku arkaan ruux katirsan Al-Shabaab .
”Waxaan idiin sheegayaa Shabaab nimanka la yiraahdo malahan Qabiil ,malahan ehel ,ma galaan qaraabanimo iyo walaalnimo , meeshii aad ku aragtaan wiil ama gabar katirsan AL-Shabaab usoo sheegaya Ciidanka amaanka si shartooda looga hortago ” ayuu yiri Madaxweynaha Dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku guubaabiyay Shacabka Soomaaliyeed in aysan cabsan soona wargaliyaan meeshii Shabaab ku arkaan , waxa kale uu dadka ka codsaday ruuxii Shabaab katirsan ee la xiro in aysan soo daba kicin.
”Ha cabsanina nafta hal mar ayey go’aysaa , qof walbo maalintii rabi qadaray ma dhaafayo , hadii aad ka cabsato ruux telfoon kaa soo wacay ama kuu hanjabay taasi waxa ay muujineysaa in caqiidadaada aysan saxneyn , nafta hal mar ayey baxeysaa ee soo sheega meeshii aad ku aragto qof Shabaab ah si shartooda umada loo dhaafiyo” ayuu ku cel celiyay Madaxweyne Xasan Sheekh.
Hadalka Madaxweynaha ayaa imaanaya xili maalintii Shalay dagaalyahano hubeesan oo katirsan Xarakada Al-Shabaab ay weerar qorsheesan ku qaadeen Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ,kuwaa oo doonayay in ay qaarijiyaan Madaxweynaha.